ဈေးနှုန်းသက်သာသော တရုတ်လက်ကား Monocrystalline Bifacial Solar Panel - Rixing Electronics
Cixi City Rixing Electronics Co., Ltd သည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် monocrystalline bifacial ဆိုလာပြား၏ ထိပ်တန်း၊ ကမ္ဘာကျော် နာမည်ကြီး စက်ရုံဖြစ်ပြီး လူနေအိမ်၊ လုပ်ငန်းသုံးနှင့် အသုံးဝင်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် စုစုပေါင်း လုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် 2004 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး vaule ထုတ်လုပ်မှုကို တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ ၎င်း၏ရွေးချယ်ထားသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖောက်သည်များအတွက်။ အရည်အသွေးနှင့် ပံ့ပိုးမှုများဖြင့် ပံ့ပိုးထားသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အစွမ်းထက်ဆုံးနှင့် ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးဖြစ်သည့် Cixi City Rixing Electronics ၏ စုစုပေါင်း solar pv လုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက်များအား ဝန်းရံထားသည်။
Monocrystalline bifacial ဆိုလာပြားသည် နောက်ဘက်ခြမ်းမှ ထပ်လောင်းစွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှု (30%) ဒုတိယမြောက် bifacial နည်းပညာအားလုံး၏ ပထမဆုံး အားသာချက်များစွာရှိသည် ။ တတိယအချက်မှာ 100% EL စစ်ဆေးရေးအာမခံချက်နှစ်ခုအဆင့် ချို့ယွင်းချက်ကင်းသော ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။
Monocrystalline bifacial ဆိုလာပြားသည် ပြင်းထန်သော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရရှိထားပါသည်-
1. Anti-refective & anti-soiling မျက်နှာပြင်သည် ဖုန်မှုန့်နှင့် ဖုန်မှုန့်များမှ ပါဝါဆုံးရှုံးမှုကို လျော့နည်းစေသည်။
2. ပြင်းထန်သော ဆားအခိုးအငွေ့များ၊ အမိုးနီးယားနှင့် လေလွင့်သဲများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော၊ ပင်လယ်ကမ်းစပ်၊ ဘောင်နှင့် ကန္တာရပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်။
3. Excellent က mechancial load 2400Pa နှင့် snow load 5400 Pa ခုခံမှု။
Cixi City Rixing Electronics Co., Ltd သည် Ningbo ရှိ ဆိုလာပြားများ ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
390w monocrystalline bifacial ဆိုလာပြားများသည် မြင့်မားသော photoelectric ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကောင်းမွန်သော တည်ငြိမ်မှုရှိသည်။ 9BB နည်းပညာသည် ပင်မဘတ်စ်ဘားများနှင့် လက်ချောင်းဂရစ်လိုင်းများကြား အကွာအဝေးကို လျှော့ချပေးကာ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းများ ဆုံးရှုံးသွားကာ ပါဝါတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက် အကျိုးကျေးဇူးရှိသည်။
Rixing Electronics သည် စတော့တွင်ရရှိနိုင်သော Monocrystalline Bifacial ဆိုလာပြား ကို အဓိကအားဖြင့် ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Monocrystalline Bifacial ဆိုလာပြား ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော 31 နှစ်ကစတင်တည်ထောင်ကတည်းက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်များကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သော ထုတ်ကုန်များသည် စျေးသက်သက်သာသာသာမက တာရှည်ခံပြီး ထိရောက်မှုလည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် CE နှင့် TUV အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားပြီး 25 နှစ်အာမခံပါရှိပြီးအရည်အသွေးကိုအာမခံပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် grid photovoltaic စနစ်များနှင့် grid photovoltaic စနစ်များကို လက်ကား သို့မဟုတ် အစုလိုက် ဝယ်ယူပါက၊ သင့်အား စျေးနှုန်းချိုသာစွာ ပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းအား၊ အဆင့်မြင့်ပြီး သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး သင့်အား စျေးနှုန်းစာရင်းတစ်ခုပေးပါမည်။